Madaxwetnahii Hirshabeele oo Doornaa oo la Doortay | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxwetnahii Hirshabeele oo Doornaa oo la Doortay
Waxaa goordhaw magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle lagu doortay Madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabelle hogaamin doona afarta sano ee soo socota Cali Guudlaawe Xuseen.
Doorashada ka dhacday magaalada Jowhar oo aheyd mid aan xiiso laheyn horeyna looga war qabay natiijada kasoo bixi doonto ayaa ugu dambeyn noqotay sidii la filayay uuna ku guuleestay Musharaxii ay wadatay Villa Soomaaliya.
Guddiga doorashada Madaxweynaha Hirshabelle ayaa sheegay in Cali Guudlaawe helay codad gaaraya 86 cod halka Musharaxa la tartamayay Cabdiraxmaan Jimcaale Cismaan oo goobta u yimid qaab malxiis ah uu helay 13-cod.
Xildhibaanada Baarlamaanka Hirshabelle ayaa sidoo kale la filayaa in goordhaw Madaxweyne kuxigeenka maamulka Hirshabelle u doortaan Yuusuf Axmed Hagar Daba Geed oo isna wadato Villa Soomaaliya.
Doorashada Hirshabelle ayaana sanadkan aheyd mid aan xiiso badan laheyn, waxaana Hogaanka Baarlamaanka maamulkaasi iyo Madaxweynaha iyo kuxigeenkiisa laga qoray Villa Soomaaliya iyo NISA iyadoona sidii loo qorsheeyay howsha u socoto.
Previous articleCiidamada Dowlada oo ku dilay Saraakiil shabaab ah deegaanka Baarsanguuni oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose
Next articleTaariikh Nololeedka Madaxweynaha Cusub ee Hirshabelle.
Computer laptop iib ah
Dowlada Kenya oo lagu wado in Visaha dalku galka Somalida uga...
Musharax Xasan Cali Kheyre oo sheegay in uu ka nid ah...